Somaliland Oo Ka Hadashay Dib U Dhac Ku Yimid Wada Hadalkii Kala Dhaxeeyey Dowladda Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
10th November 2013 MAREEG Af Soomaali 0
Hargeysa, November 10, 2013: Wasiirka Arrimaha Dibadda maamuylka gooni isu taaga ah ee Somaliland Maxamed Biixi Yoonis, ayaa ka hadlay dib u dhac uu sheegay inuu ku yimid wada hadalkii dalka Turkiga markii labaad ku dhexd mari lahaa dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
Maxamed Biixi Yoonis oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in wada hadalkii u dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland oo horaanta bishan November ka furmi mlahaa dalka Turkiga uu dib u ugu dhacay ilaa bisha December ee sannadkan 2013.
Wasiir Maxamed Biixi Yoonis ayaa sheegay in dib u dhacay ay codsatay dawlada Soomaaliya oo sheegtay inay hawlo horyaalla darteed aanay shirkaasi wakhtigii lagu balansanaa dhici karin.
Wasiirka ayaa sheegay in safiirka dalka Tukiga u jooga Muqdisho uu maamulka Somaliland kusoo wargeliyey in shirku dib u dhacay ilaa biusha December, arrintaasna ay aqbaleen.
“Dowladda Soomaaliya ayaa codsadatay in wada hadalka dib loo dhigo howlo jira aawgood, waana aqbalnay, Safiirka Turkigaayaa nala soo xiriiray waxaana u sheegnay iney inoo fiican tahay toddobaadka u horaysa ee bisha December” ayuu yiri wasiirka arrimaha debadda maamulka Somaliland.
Dowladda Soomaaliya kama hadlin warka kazoo baxay wasaaradda arrimaha debadda maamulka Somaliland oo ku saabsan in dib u dhaca ku yimid wada hadalka labada dhinac uu ku yimid codsiga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Qodobadii Kasoo Baxay Shirkii Dib U Habeynta Caafimaadka Soomaaliya